लगभग सबै अवस्थामा यी वर्ण को सम्बन्ध, को ग्रह र नक्षत्र गाह्रो पक्षहरू छन् जहाँ बाहेक, पानी को तत्व कमै मात्र छन्। मूलतः अनुकूलता क्यान्सर र मीन एकदम सकारात्मक छ।
अनुकूलता Horoscope क्यान्सर र मीन मीन को duality रूपमा खाता जस्तै कारक मा लिनुपर्छ (तिनीहरूले उत्तिकै, secretive संवेदनशील, गैर-स्थायी र परिवर्तन जोडी छन्)। यो प्रजाति राशिफल बस जस्तै परिर्वतनशील को मूड ebb र प्रवाह सागर, यो भविष्यवाणी गर्न बस असम्भव छ।
यो साइन थप अपेक्षित छ र शक्ति अन्तर्गत माछा बस को चरणहरु पात्रो को प्रावधान गर्न adhering, साझेदार व्यवहारलाई भविष्यवाणी गर्न। क्यान्सर र मीन - रोमाञ्चक होश, भावना को एक रहस्यमय र रोमाञ्चकारी खेल को एक समुद्र। अनुकूलता क्यान्सर र मीन, दुई वर्ण तत्व पानी र पानी संयोजन जस्तो देखिन्छ, तर कुनै एक को एक स्थायी र पूर्ण अनुकूलता ग्यारेन्टी हुनत। संघर्ष (र अन्यत्र) अपरिहार्य छन्; कार्ड जन्म को अझै पनि विभिन्न natures को व्यक्तिगत गुणहरू बीच फरक निशान, तर पनि बीच चन्द्रमा - ONT सूर्य जस्ता नकारात्मक पक्ष मा मात्र भर पर्छन्।
वित्तीय मुद्दाहरू अनुकूलता क्यान्सर र मीन ठूलो प्रश्न अन्तर्गत हुन्छ जब रूपमा यस्तो लहर उठाएको कुनै पनि सुनामी उज्यालो सुनिनु को पृष्ठभूमिमा प्रदर्शित हुनेछ। मीन चिन्ह प्रतिनिधिको मुख्य रूप दुष्ट रूपमा एक सम्झेर पछुतो मान्दै inevitability रूपमा वित्तीय मुद्दा सम्बन्धित छन्। तिनीहरूले नगद गर्न सकल लापरवाही देखाउँदै नेप्च्युन को प्रभाव अन्तर्गत हुनुहुन्छ, र बचत र बचत गर्न खुलस्त नीरस रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
क्रेफिश पनि आदरपूर्वक पैसा हौं र आदर, तिनीहरूले कुनै पनि सांगीतिक मा सिक्का को ध्वनि रुचि र बैंकनोट्स को rustle यो सिम्फनी प्रतिस्थापन। वित्त - अनुकूलता क्यान्सर र मीन जसमा पहिलो आफ्नो विचार र साझेदार को चासो प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्ध, एक loophole छ। तर उहाँले लापरवाह, बचत र सावधानी छ - यो आफ्नो आदर्श वाक्य छ।
माथि उल्लेख रूपमा, क्यान्सर र मीन अनुकूलता अरूलाई सम्बन्ध मा यस बाहेक उनीहरूले ठूलो मालिक र आफूलाई लागि तिनीहरूलाई remake गर्न प्रयास सबै समय हो, धेरै बलियो छ। क्यान्सर र मीन तिनीहरूले सात ताले पछि आफ्नो रहस्य राख्न एकै समयमा अरूको मामिलामा हस्तक्षेप र मानिसहरूको रहस्य जान्न, पुजा गर्नु। यी संकेत अनुकूलता Horoscope क्यान्सर तिनीहरूलाई प्राण साझेदार र साझेदारी खन्याइदिएकी गर्दा सबै लुकेका, माछा धेरै, धेरै ध्यान दिएर तिनलाई, सुन्न, र यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ एकदम भवदीय भन्छन्।
तर अबरोध गर्न सक्ने अनुकूलता "क्यान्सर र माछा" बाह्य धम्की बारे मा भूल छैन। यी धम्की रक्सी र लागूपदार्थ बन्न सक्छ। यो पनि छैन बहिष्कृत छ, र वास्तविकता देखि प्रस्थान को कुनै कम खतरनाक भेद - सपना र आत्म-छलछाम। त्यसैले क्यान्सर र मीन वरपरको संसारको आफ्नो धारणा धेरै ध्यान हुनुपर्छ।
हामी क्यान्सर र मीन को अनुकूलता कुरा गर्दा, हामी मतलब पहिलो साइन इन - एक घर र यसको साझेदार - अनन्त adventurers छ। तर यो आक्रमण ठाउँहरू परिवर्तन गर्न यसलाई आफ्नै आकर्षण त्यस हुन्छ, तर यति सडक घर फिर्ता गर्न सजिलो उहाँलाई फेला पार्न भनेर। उहाँले अभिलाषा को चारा हुन्छ। यो दोष बस आफ्नो जीवन लायक दुनिया साबित गर्न, विश्वको अन्त हुनत यो खींचती। तर नबिर्स क्यान्सर हृदय परिवार चिमनी मा सधैंभरि घर रहनेछ।
आफ्नो साथी, तिनीहरूले त घर संलग्न छैनन् रूपमा मीन चिन्ह प्रतिनिधिको छैन रूपमा भावुक छ। घर र आरामदायक र सुरक्षित भए तापनि तिनीहरूले अर्को ताल वा सागर गर्न ब्रेक बेला slightest मा तयार छन्।
अनुकूलता क्यान्सर र मीन तपाईं सँगै यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ, र त्यो तिनीहरूलाई धेरै खुशी ल्याउनेछ। तर केही समय क्यान्सर ढिलो होस् वा पछि घर फर्कन चाहन्छु, जो आफ्नो साझेदार को भने गर्न सकिँदैन, साझेदार संग एकता बाहिर सबैभन्दा फर्कन निर्णय हुनेछ जो पछि। नेप्च्युन को प्रभाव अन्तर्गत भएका मान्छे, कुनै पनि परिवर्तन - र जीवनको अर्थ: तिनीहरूले ऊर्जा र परिवर्तन गर्न इच्छा भरिएका छन्, र यो अद्भुत क्षण लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन! तर यो अचानक आउँदा, माछा अझै पनि उतार चढाव, सबै "फाइदा" र वजन "बुरा।" तर यो एक विकल्प वा गर्न समय छ कि छैन भनेर बिना यो अझै माथि, त्यो कहिल्यै फेरि साहसिक दोहोरिन र नयाँ निर्णय गर्न आशा गुमाए गएको छैन।
इन्टरअपेराबिलिटी को विवरण, मूल्य। Albina नाम
नाम अलेक्जेन्डर के हो?
तातो स्वभावका मेष: अन्य संकेत संग अनुकूलता
कानुनी संस्थाहरू र व्यक्तिहरूलाई गर्न Overdraft ऋण
Parapet टोपी। तपाईंले तिनीहरूलाई बारेमा जान्नु आवश्यक छ के
कसरी दक्षिण मा Melons बढ्न
अपरेटर "टेली 2" कल कसरी? नम्बर समर्थन
फलाम वा एक्रिलिक डाली - सबै भन्दा राम्रो स्नान के हो? हामी एक विकल्प बनाउन
Splenius capitis मांसपेशी: लक्षण, उपचार र रोग को रोकथाम
औषधि "Polisorb": निर्देशन, गुण, विशेषताहरु
शहर पल्ट, मोन्टेनेग्रो: ठाँउहरु र वरपर
"Terrarium": यांत्रिक कृमि र यसको उन्मूलन को रणनीति
म बाल नै कटौती गर्न सक्छन्? Omen "मेरो कपाल काट्न"
संगठित अपराध: परिभाषा, कारणहरू, अवस्था